Ukudla kwesifo sikashukela sohlobo 2, amamenyu evikini, imikhiqizo evunyelwe nenqatshelwe > Ukudla ngesifo sikashukela
Imikhiqizo enconyelwe ushukela: imenyu evikini
Isifo sikashukela i-mellitus, ngaphandle kokungabaza, singenye yezindlela ezibaluleke kakhulu zohlelo lwe-endocrine, esidinga ukubhekwa njalo ngudokotela nesiguli. Noma ngubani ohlangabezana nalokhu kutholwa uzovuma ukuthi isabelo esikhona sezincomo nemikhawulo yezokwelapha siphathelene nokudla komuntu nsuku zonke. Eqinisweni, lokhu ukwelashwa okuyinhloko, lapho enye inkambo yesifo kanye nesimo sogulayo sincike kuyo.
Uma kutholakala ukuthi unomdlavuza wesifo sikashukela sohlobo lwe-2, ukudla okuthile kufanele kufundwe yinhliziyo, kepha kungcono ukukuphrinta futhi ukukugcine njalo phambi kwamehlo akho, kodwa into esemqoka ukukugcina ngokuqinile. Futhi yeka ukuthi labo abakholelwa ekutheni kusuka kubashokoleti abambalwa noma izingilazi ezimbalwa zotshwala ngeke kwenzeke. Ukuphazamiseka okunjalo kubhubhisa yonke imizamo yangaphambilini futhi kungahle kube sesimweni esibucayi esidinga ukuvuselelwa, kanye nokwenqatshwa okuphelele kokudla.
Ekuqaleni, kunconywa ukugcina idayari yokudla (ephepheni noma ku-inthanethi), ukuqopha konke okudliwayo phakathi nosuku namanye amaphuzu asemqoka wokudla okunempilo.
Izimiso eziyisisekelo zokudla okunempilo
Ezigulini ezinesifo sikashukela ezilandela ngamabomu noma ngokungazi ngaphambi kokuxilongwa, ngenxa yenani ngokweqile lama-carbohydrate ekudleni, ukuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin kulahlekile. Ngenxa yalokhu, ushukela egazini ukhula futhi ugcina ngamanani aphezulu. Inhloso yokudla kwabanesifo sikashukela ukubuyela kumaseli umuzwa olahlekile we-insulin, i.e. ikhono lokufunda ushukela.
Ukunciphisa inani le-calories eyanele ngenkathi kugcinwa inani layo lamandla womzimba.
Ingxenye yamandla yokudla kufanele ilingane nokusetshenziswa kwamandla kwangempela.
Ukudla cishe ngasikhathi sinye. Lokhu kunomthelela ekusebenzeni kahle kwesistimu yokugaya ukudla kanye nenkambo ejwayelekile yezinqubo ze-metabolic.
Ukudla okumelwe kube yi-5-6 ngosuku, nokudla okulula - lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kwiziguli ezithembela i-insulin.
Okufanayo (cishe) ekudleni okukhulu kwe-caloric. Ama-carbohydrate amaningi kufanele abe engxenyeni yokuqala yosuku.
Ukusetshenziswa okubanzi kohlobo oluvumelekile lwemikhiqizo ezitsheni, ngaphandle kokugxila kokuthile okuthize.
Ukungeza imifino emisha, enothile kakhulu kuhlu oluvunyelwe kusitsha ngasinye ukudala ukugcwala futhi kunciphise izinga lokufakwa koshukela okulula.
Ukushintsha ushukela ngezinsimbi ezivunyelwe futhi eziphephile ngamanani ajwayelekile.
Izintandokazi zama-dessert aqukethe amafutha emifino (iyogathi, amantongomane), ngoba ukuqhekeka kwamafutha kubambezela ukumunca ushukela.
Ukudla amaswidi kuphela ngesikhathi sokudla okuyinhloko, hhayi ngesikhathi sokudla okulula, uma kungenjalo kuzoba nokuxhuma okubukhali kushukela wegazi.
Ukukhawulelwa okuqinile kuze kufakwe ngokuphelele kuma-carbohydrate angagayeka kalula.
Khawulela ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi.
Ukunciphisa umkhawulo wamafutha ezilwane ekudleni.
Ukukhishwa noma ukuncishiswa okukhulu kasawoti.
Ukudlula kokuhlukumeza, i.e. ukulayisha ipheshana eligayayo.
Ukuhlukile kokudla ngokushesha ngemuva kokuzivocavoca noma kwezemidlalo.
Ukukhishwa noma ukukhawulelwa okubukhali kotshwala (kufika ku-1 okhonza phakathi nosuku). Ungaphuzi ngesisu esingenalutho.
Sebenzisa izindlela zokupheka zokudla.
Inani eliphelele loketshezi lwamahhala nsuku zonke lungamalitha ayi-1.5.
Ezinye izici zomsoco ofanele wesifo sikashukela
Akunakusho ukuthi kufanele unganaki ibhulakufesi.
Awukwazi ukubulawa yindlala futhi uthathe ikhefu elide ekudleni.
Ukudla kokugcina kungakapheli amahora amabili ngaphambi kokulala.
Izitsha akufanele zishise kakhulu futhi zibanda kakhulu.
Ngesikhathi sokudla, imifino idliwa kuqala, bese kuba ngumkhiqizo wamaprotheni (inyama, ushizi wekhokho).
Uma kunenani elikhulu lama-carbohydrate esidlweni, kufanele kube namaprotheni noma amafutha afanele okunciphisa ijubane lokugaya kwangaphambilini.
Kungcono ukuphuza iziphuzo ezivunyelwe noma amanzi ngaphambi kokudla, futhi ungaphuzi ukudla kuzo.
Lapho ulungiselela ama-cutlets, isinkwa asisetshenziswa, kepha ungangeza i-oatmeal nemifino.
Awukwazi ukwandisa i-GI yemikhiqizo, ngaphezu kwalokho uyithambise, engeza ufulawa, isinkwa ku-breadcrumbs ne-batter, ukunambitheka ngamafutha ngisho nokubila (ama-beet, amathanga).
Ngokungabekezeleli kahle imifino eluhlaza, benza izitsha ezibhakwe kubo, ama-pastas ahlukahlukene kanye no-pastes.
Yidla kancane nezingxenye ezincane, ukuhlafuna ngokucophelela ukudla.
Ukuyeka ukudla kufanele kube kokugcwaliswa okungama-80% (ngokusho kwemizwa yomuntu).
Yini Inkomba ye-glycemic (GI) futhi kungani kudalwa isifo sikashukela?
Lokhu kuyinkomba yekhono lemikhiqizo ngemuva kokungena emzimbeni ukubangela ukwanda koshukela wegazi. I-GI ihambelana ngqo nesifo sikashukela esibucayi esine-insulin.
Umkhiqizo ngamunye une-GI yakhe. Ngokuvumelana nalokho, lapho ephakeme, ngokushesha inkomba kashukela wegazi ikhuphuka ngemuva kokusetshenziswa kwayo okuphambene nalokho.
Ibanga GI lihlanganyela yonke imikhiqizo ngama-high (amayunithi angaphezu kwangama-70), aphakathi nendawo (41-70) ne-GI ephansi (aze afike ku-40). Amatafula anokwehlukaniswa kwemikhiqizo kulawa maqembu noma ama-on-line wokubala wokubala i-GI atholakala kumaphakethe we-thematic futhi awasebenzise empilweni yansuku zonke.
Konke ukudla okune-GI ephezulu akufakiwe ekudleni ngaphandle kokungafani nalutho okuzuzisa umzimba womuntu onesifo sikashukela (uju). Kulokhu, i-GI ephelele yokudla iyancishiswa ngenxa yokuvinjelwa kweminye imikhiqizo ye-carbohydrate.
Ukudla okujwayelekile kufanele kube nokudla okune-GI ephansi (ikakhulu) kanye naphakathi (ingxenye ephansi).
Isifo sikashukela mellitus Ingabe isifo esenzeka lapho kungabikho mkhiqizo owanele insulin pancreas. Isizathu esiyinhloko salokhu ukudla ngokweqile kanye nokusetshenziswa kwamafutha amaningi nama-carbohydrate. Lokhu kwenza ama-pancreas, "ukuhlaselwa kwe-carbohydrate", "asebenze kuze kube semkhawulweni". Lapho amazinga kashukela enyuka ngemuva kokudla, i-iron inyusa ukukhishwa kwe-insulin. Lesi sifo sisuselwa ekuphazanyisweni kwe-carbohydrate metabolism: ukuthathwa kwe-glucose engasebenzi kahle ngezicubu nokwanda kwawo kusuka emafutheni glycogen.
Okuvame kakhulu Uhlobo 2 sikashukela, ikhula kaningi kubantu abadala abangaphezu kweminyaka engama-40 nasebekhulile. Isibalo seziguli sikhula ikakhulukazi ngemuva kweminyaka engama-65. Ngakho-ke, ukwanda kwalesi sifo kungama-8% eneminyaka engama-60 futhi kufinyelela kuma-23% kuma-80. Kubantu asebekhulile, ukunciphisa ukusebenza komzimba, ukwehla kwesisindo semisipha esisebenzisa ushukela, kanye nokukhuluphala kwesisu kukhulisa ukumelana okukhona kwe-insulin. Ebudaleni, i-glucose metabolism inqunywa ukuzwela kwezicubu kuya insulinkanye nemfihlo yale hormone. Ukumelana ne-insulin kubizwa kakhulu kubantu abakhuluphele ngokweqile, futhi ukwehliswa kokuqhekeka kubusa kubantu abakhuluphele, okuvumela indlela ehlukanisiwe ekwelashweni. Isici salesi sifo ngalesi sikhathi siyinkambo ye-asymptomatic, kuze kube yilapho kuvela izinkinga.
Le ndlela yesifo sikashukela ivame kakhulu kwabesifazane futhi amathuba okuba khona kwayo ayanda ngokuguga. Ukudlanga kwesifo okujwayelekile kubantu besifazane abaneminyaka yobudala engama-56-64 kuphakama ngama-60-70% ukwedlula kwabesilisa. Futhi lokhu kungenxa yokuphazamiseka kwama-hormonal - ukuqala kokuya esikhathini nokuntuleka kwe-estrogen kusebenze umthelela wokuphendula kanye nokuphazamiseka kwe-metabolic, okuhambisana nokuthola isisindo, ukubekezelela i-glucose engasebenzi kahle kanye nokuvela kwe-dyslipidemia.
Ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungamelwa yisikimu: ukukhulupha - ukumelana nokuqina kwe-insulin - ukwenyuka kwamazinga kashukela - ukukhiqizwa kwe-insulin - ukwenyuka kwe-insulin. Kuvela umbuthano onesihluku esingaka, futhi umuntu ongakwazi lokhu, adle ama-carbohydrate, anciphise ukusebenza kwakhe ngokomzimba futhi abe namafutha minyaka yonke. Amaseli weBeta asebenzela ukugqokwa, kanti umzimba uyama ukuphendula esibonelweni esithunyelwa yi-insulin.
Izimpawu zesifo sikashukela i-mellitus zijwayelekile impela: umlomo owomile, ukoma okungapheli, ukuchama, ukukhathala okusheshayo, ukukhathala, ukulahleka kwesisindo okungabonakali. Isici esibaluleke kakhulu salesi sifo yi-hyperglycemia - ushukela wegazi ophezulu. Olunye uphawu olubonakalayo umuzwa wendlala yesifo sikashukela mellitus (polyphagy) futhi lokhu kudalwa yindlala yeglucose yamaseli. Ngisho nokudla kwasekuseni okuhle, isiguli ngehora sinomuzwa wendlala.
Ukudla okwandayo kuchazwa iqiniso lokuthi i-glucose, esebenza “njengophethiloli” wezicubu, ayingene kuzo. Inesibopho sokulethwa kweglucose kumaseli insulin, eziguliswa yiziguli noma izicubu azithinteki kukho. Ngenxa yalokho, ushukela awungeni emangqamuzaneni, kodwa ungena egazini futhi uqongelele. Amaseli entula umsoco athumela isibonakaliso ebuchosheni, avuselele i-hypothalamus, bese umuntu eqala ukuzizwa elambile. Ngokuhlaselwa njalo kwe-polyphagy, singakhuluma ngesifo sikashukela esisetshenziswayo, esibonakala ngokunyuka okukhulu kokuguquguquka kweshukela ngesikhathi sosuku (0, 6 - 3, 4 g / l). Kuyingozi ukuthuthuka ketoacidosis futhi onesifo sikashukela.
At isifo sikashukela insipiduse, ehambisana nokuphazamiseka ohlelweni oluphambili lwezinzwa, kuboniswa izimpawu ezifanayo (ukoma okhuphukile, ukwanda kwenani lomchamo okuxoshwa kuze kufinyelele kumalitha ayi-6, isikhumba esomile, ukuncipha kwesisindo), kepha uphawu olukhulu alukho - ukwanda koshukela wegazi.
Abalobi bakwamanye amazwe bathambekele ekukholweni ukuthi ukudla kweziguli ezithola ukwelashwa okubuyiselwe esikhundleni akumele kukhawulele ama-carbohydrate alula. Kodwa-ke, umuthi wasekhaya ugcina indlela yangaphambi kokwelashwa kwalesi sifo. Ukondleka okufanele kwesifo sikashukela kuyindlela yokwelapha esigabeni sokuqala sesi sifo, iphuzu eliyinhloko kushukela ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo futhi kudingekile ngesifo sikashukela esincike ku-insulin.
Yikuphi ukudla okufanele kuqashelwe iziguli? Babelwe Ukudla inombolo 9 noma izinhlobo zalo. Lokhu kudla kokudla kuvamile ukwenzeka kwe-carbohydrate metabolism (kukuvumela ukuthi wehlise ushukela wegazi futhi uzinze ngezinga eliseduze nokujwayelekile, futhi kuvimbela ukuphazamiseka kwe-metabolism. Imigomo yokwelapha ekudleni kuleli tafula isuselwa ekuvinjelweni okubukhali noma ngaphandle kwe-carbohydrate elula nokufakwa kwe-carbohydrate eyinkimbinkimbi kuze kufike ku-300 g ngosuku).
Inani lamaprotheni lingaphakathi kokujwayelekile ngokomzimba. Inani lama-carbohydrate alungiswa udokotela ngokuya ngesilinganiso sokwanda ushukela, isisindo sesiguli nezifo ezihlobene naso.
Uhlobo Lwesifo Sikashukela 1
Lolu hlobo lwesifo sikashukela luvame kakhulu esemncane nasezinganeni, isici salo okuwukuqalwa okungazelelwe kokuphazamiseka okunamandla kwe-metabolic (i-acidosis, ketosis, ukomisa) Kwasungulwa ukuthi ukwenzeka kwalolu hlobo lwesifo sikashukela akuhlotshaniswa nesici sokudla, kepha kubangelwa ukubhujiswa kwama-b-cell of pancreas, okuholela ekusweleni kwe-insulin ngokuphelele, ukusetshenziswa kweglucose okulimazayo, kanye nokwehla kwamaprotheni namafutha. Zonke iziguli zidinga ukwelashwa kwe-insulin impilo yonke, uma umthamo wayo unganele, i-ketoacidosis kanye nesifo sikashukela sikhula. Ngokubaluleke kakhulu, lesi sifo siholela ekukhubazekeni nasekushoneni okukhulu ngenxa yezinkinga ezincane ze-macroangiopathic.
Ukudla okunesifo sikashukela sohlobo 1 akuhlukile ekudleni okujwayelekile okunempilo futhi nenani lama-carbohydrate alula liyanda kuwo. Isiguli sikhululekile ukukhetha imenyu, ikakhulukazi ngokuqinisa kakhulu i-insulin. Manje cishe bonke ochwepheshe bakholelwa ukuthi ungadla konke ngaphandle koshukela namagilebhisi, kepha udinga ukwazi ukuthi kungakanani futhi ungadla nini. Eqinisweni, ukudla kudambisa phansi ukubala ngokunembile inani lama-carbohydrate ekudleni. Kunemithetho eminingana ebalulekile: azidliwe izingcezu ezingaphezu kwezingu-7 zesinkwa ngasikhathi sinye, neziphuzo ezimnandi (itiye elinoshukela, ulamula, isiphuzo esimnandi) azifakwanga ngokwesigaba.
Ubunzima bulele ekubalweni okuyikho kwamayunithi wesinkwa nokunquma isidingo se-insulin. Wonke ama-carbohydrate alinganiswa emayunithi esinkwa futhi ubungako bawo obuthathwe ngokudla ngasikhathi sinye buhlanganiswa. I-XE eyodwa ifana ne-12 g yama-carbohydrate futhi iqukethe ku-25 g yesinkwa - yingakho igama. Kuhlanganiswe itafula elikhethekile kumayunithi wesinkwa aqukethwe emikhiqizweni ehlukile futhi kuyo ungabala ngokunembile inani lama-carbohydrate asetshenzisiwe.
Lapho ulungiselela imenyu, ungashintsha imikhiqizo ngaphandle kokudlula inani lama-carbohydrate anikezwe udokotela. Ukulungiswa kwe-1 XE, ungadinga i-2-2.5 IU ye-insulin ngesidlo sasekuseni, i-1.5-2 IU yesidlo sasemini, kanye ne-1-1.5 IU ngesidlo sakusihlwa. Lapho uhlanganisa ukudla, kubalulekile ukuthi ungadli okungaphezu kwama-25 XE ngosuku. Uma ufuna ukudla okuningi, kuzodingeka ukuthi ufake i-insulin eyengeziwe. Lapho usebenzisa i-insulin emfushane, inani le-XE kufanele lihlukaniswe phakathi kokudla okuyinhloko okungu-3 nokungu-3 okwengeziwe.
I-XE eyodwa iqukethe izinkomba ezimbili zanoma yiliphi iphalishi. Izipuni ezintathu zepasta zilingana nezipuni ezine zerayisi noma i-buckwheat porridge nezingcezu ezimbili zesinkwa futhi zonke ziqukethe i-2 XE. Ukudla okuthe xaxa kubilisiwe, kuthathwa ngokushesha futhi ushukela ukhuphuka ngokushesha. I-peas, i-lentil nobhontshisi azinganakwa, ngoba i-1 XE itholakala emafutheni ayi-7 alezi zimabula. Imifino inqoba kulokhu: i-XE eyodwa iqukethe ama-400 g wamakhukhamba, ama-350 g we-lettuce, u-240 g wekholifulawa, 210 g utamatisi, ama-330 g amakhowe amasha, ama-200 g we-pepper eluhlaza, 250 g wesipinashi, 260 g we-sauerkraut, 100 g wezaqathi kanye ne-100 g ama-beets.
Ngaphambi kokudla amaswidi, kufanele ufunde ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-insulin eyanele. Vumela amaswidi kulezo ziguli ezilawula ushukela wegazi kaningana ngosuku, ziyakwazi ukubala inani le-XE futhi, ngokufanele, zishintshe umthamo we-insulin. Kuyadingeka ukulawula izinga loshukela ngaphambi nangemva kokuthatha ukudla okumnandi nokuhlola umthamo ofanele we-insulin.
Inombolo Ukudla 9B Kuboniswa iziguli ezinesimo esibi sesifo esithola imithamo emikhulu ye-insulin, futhi kubonakaliswa okuqukethwe okunyukayo kwama-carbohydrate (400-450 g) - isinkwa esiningi, amabele, amazambane, imifino nezithelo kuvunyelwe. Inani lamaprotheni namafutha lenyuka kancane. Ukudla kufana nokwakheka etafuleni elijwayelekile, ama-20-30 g kashukela kanye nama-sweeteners ayavunyelwa.
Uma isiguli sithola i-insulin ekuseni nantambama, khona-ke ama-70% ama-carbohydrate kufanele abe kulezo zidlo. Ngemuva komjovo we-insulin, udinga ukudla kabili - emva kwemizuzu eyi-15 nangemva kwamahora ama-3, lapho umphumela wawo omkhulu uphawulwa. Ngakho-ke. ) Ngokwazisa kwe-insulin kusihlwa ngaphambi kokudla, udinga ukushiya ukudla okuncane ebusuku ukuvikela ukusabela kwe-hypoglycemic. Imenyu yamasonto onke yabanesifo sikashukela izokwethulwa ngezansi.
Izifundo ezimbili ezinkulu zibonakalise ngokuqiniseka izinzuzo zokulawulwa kwe-carbohydrate metabolism ngokuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga ze-micvasvas kanye ne-macrovascular. Uma izinga kashukela lidlula okujwayelekile isikhathi eside, khona-ke izinkinga ezihlukahlukene ziqhamuka: isifo sokuqina kwemizwaukonakala okunamafutha kwesibindi, kepha okubabazekayo - isifo sikashukela se-nephropathy (ukulimala kwezinso).
Amaproteinuria - Isibonakaliso sokuqala sale nqubo ye-pathological, kepha sivele kuphela esiteji IV, kanti izigaba ezintathu zokuqala zi-asymptomatic. Ukuvela kwayo kukhombisa ukuthi ama-50% we-glomeruli ayakanwa kanti kunenqubo engenakuphikwa. Kusukela ukuqala kwe-proteinuria, ukwehluleka kwe-renal kuyaqhubeka, okuholela ekugcineni ekukhulekeni kwe-terminal chronic renal ukwehluleka (ngokuvamile iminyaka engama-5-7 ngemuva kokuvela kwe-proteinuria ephikelelayo). Ngesifo sikashukela, inani likasawoti lilinganiselwe (12 g ngosuku), futhi nge-nephropathy yezinso, inani lazo liyancishiswa ngisho nangokwengeziwe (3 g ngosuku). Ukwelashwa nokwondleka nakho kuyalungiswa lapho unhlangothi.
Kuyini i-GI nokuthi kungani kufanele uyazi
Sonke isiguli sikashukela, kungakhathalekile ukuthi luhlobo luni, kufanele sazi umqondo wenkomba ye-glycemic futhi sinamathele ekukhetheni kokudla okusekelwe kulezi zinkomba. Inkomba ye-glycemic ilingana ledigital elibonisa ukugeleza kweglucose egazini, ngemuva kokusebenzisa kwabo.
Imikhiqizo yesifo sikashukela kufanele ibe ne-GI efinyelela ema-50 PIERES, lokhu kudla kwenkomba kungasetjenziswa ekudleni kwansuku zonke ngaphandle kokulimaza impilo yesifo sikashukela. Njengoba kunesikhombi esifinyelela kuma-70 PIECES, ukusetshenziswa kwawo kunconywa ngezikhathi ezithile, kepha konke lokho okuphakeme kunqatshelwe ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukufudumeza kahle imikhiqizo ukuze i-GI yabo ingakhuphuki. Izindlela zokupheka ezinconyiwe:
Ukucima umlilo (mhlawumbe emanzini),
Kumpheki ohamba kancane, izindlela “zokubhaka” nezindlela “zokubhaka”.
Ileveli yenkomba ye-glycemic nayo iyathinteka kwinqubo yokupheka uqobo. Ngakho-ke, imifino ecubuziwe nezithelo kukhulisa inkomba yazo, noma ngabe le mikhiqizo iwela ohlwini oluvumelekile. Kuyenqatshelwe futhi ukwenza amajusi ezithelo, ngoba i-GI yabo iphakeme impela, futhi iguquguquka ngokujwayelekile ngaphakathi kwesimo esingamukeleki. Kepha ujusi wamatamatisi ungadliwa ufike kuma-200 ml ngosuku.
Kunemifino ene-GI ehlukile kwifomu eluhlaza nelibilisiwe. Isibonelo esicacile salokhu makaroti. Izaqathi eziluhlaza zine-GI ye-35 IU, kodwa ku-85 IU ebilisiwe.
Lapho uhlanganisa ukudla, kufanele uqondiswe njalo etafuleni lama-indices we-glycemic.
Ukudla okwamukelekayo kanye nemithetho yesidlo
Ukukhetha kokudla kwabanesifo sikashukela kuhlukahlukene, futhi eziningi zingalungiswa kuzo, kusuka ezitsheni ezisenkingeni zabanesifo sikashukela kuya kuma-dessert amnandi. Ukukhetha ukudla ngokufanele yingxenye yempi kuphela eya ekudleni okuhleliwe kahle.
Kufanele wazi umthetho onjalo wokuthi udinga ukudla ngesifo sikashukela ezingxenyeni ezincane, okungcono ngezikhathi ezithile, ukugwema ukudla ngokweqile kanye nesiteleka sendlala. Ukuphindaphindwa kokudla kusukela ezi-5 kuye kweziyisithupha ngosuku.
Ukudla kokugcina okungenani amahora amabili wokulala. Izithelo, imifino, okusanhlamvu, imikhiqizo yezilwane ifakiwe ekudleni kwansuku zonke, futhi konke lokhu kufanele kubhekwe lapho kulungiswa imenyu yeviki.
Izithelo ezinenkomba ephansi ye-glycemic, okungukuthi, zifinyelela ku-50 PIECES ezethulwe ngezansi, ngakho-ke zingadliwa ngaphandle kokusaba ukuthi lokhu kuzothinta ushukela wegazi. Izithelo ezilandelayo zinganconywa udokotela wakho onesifo sikashukela:
Ama-currants amnyama nabomvu
Izithelo zeCitrus (noma yiziphi izinhlobonhlobo)
Inani lezithelo zansuku zonke ezinconywayo zingama-200 - 250 amagremu. Ngasikhathi sinye, izithelo ngokwazo kufanele zidliwe isidlo sasekuseni sokuqala noma sesibili, ngoba ziqukethe ushukela wemvelo futhi ukuze zikwazi ukutholwa kahle, kuzodingeka umsebenzi womzimba womuntu, okuvele nje engxenyeni yokuqala yosuku.
Imifino ingumthombo omuhle kakhulu wamavithamini namaminerali. Ukusuka kubo awukwazi ukupheka hhayi amasaladi kuphela, kodwa futhi nezitsha eziyinkimbinkimbi zenyama nezinhlanzi, ukuhlanganisa imifino ethile. Imifino ene-GI efinyelela kuma-50 PIECES:
Izaqathi (okusha kuphela),
Upelepele oluhlaza nokubomvu,
Amathanga owomile futhi ochotshoziwe - ophuzi nohlaza,
Ngesikhathi sokudla, isobho lemifino, elilungiselelwe emanzini noma kumhluzi wesibili (lapho amanzi enenyama ngemuva kokubilisa akhanywa futhi athole okusha), kuzoba isifundo sokuqala esihle. Isobho likaMash akufanele.
Ngaphansi kokuvinjelwa, imifino oyintandokazi njengamazambane isasele. Inkomba yayo ye-GI ifinyelela uphawu lwamayunithi angaphezu kwama-70.
Kodwa-ke, uma umuntu onesifo sikashukela enquma ukuziphatha esidlweni samazambane, kuzodingeka ukusike sibe izicucu kusengaphambili futhi cwilisa emanzini, mhlawumbe ebusuku. Ngakho-ke i-starch eyeqile izophuma futhi inkomba ye-glycemic izoncipha.
Ama-cereal angumthombo ongapheli wamandla wohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2. Kunezincomo zokulungiselela kwayo - ungafaki izinkomishi ngebhotela futhi ungabilise obisini. Ngokuvamile, ngemuva kokudla ingxenye yoshukela okungenani amahora ayi-2,5, akufanele udle imikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi olunoshukela, konke lokhu kungavusa ushukela wegazi.
Izinhlamvu ezivunyelwe ezinophawu lwe-GI ukuya kuma-50 PIECES:
Irayisi elinsundu (limdaka, limhlophe inqatshelwe),
Kufanele kugcizelelwe ngokwahlukana ukuthi ama-oat flakes ane-GI ephezulu, kepha uma ukhetha ama-flakes abe yi-powder noma uthenge i-oatmeal, lesi sidlo ngeke sibe yingozi koshukela.
Imikhiqizo yobisi nobisi ebilisiwe iyisidlo sakusihlwa esihle sesifo sikashukela.
Ukusuka ku-cottage shizi no-ukhilimu onamafutha amancane, awukwazi nje ukupheka hhayi okunempilo kuphela, kepha futhi nama-dessert esimnandi. Imikhiqizo yobisi elandelayo kanye nobisi olunoshukela kuvunyelwe:
Cream ngamafutha ayi-10%,
Ushizi ophansi wekotishi
Inyama ne-offal aqukethe okuqukethwe kwamaprotheni aphezulu, okunomphumela onenzuzo ngesimo sikashukela. Imikhiqizo elandelayo ivunyelwe, inyama kuphela okumele ihlolwe hhayi okunamafutha:
Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi akukho ngaphezulu kweqanda elilodwa elivunyelwe ukudliwa ngosuku; i-GI yayo engama-50 PIERES.
Ngezansi kunemenyu enhle yesonto, ongayilandela futhi ungesabi ukukhulisa ushukela wegazi lakho.
Lapho upheka futhi usabalalisa ukudla, kufanele ulandele le mithetho engenhla.
Ngaphezu kwalokho, isilinganiso soketshezi sansuku zonke kufanele okungenani sibe amalitha amabili. Onke amathenda angenziwa noshukela. Umkhiqizo onjalo wokudla uthengiswa kunoma iyiphi ikhemisi.
Ukudla kwasekuseni - igremu yesaladi yezithelo (i-apula, i-orange, i-pearl) evunyelwe ngeyogathi engafakiwe,
Ukudla kwasekuseni kwesibili - ushizi we-cottage, 2 ama-PC. amakhukhi we-fructose
Isidlo sasemini - isobho semifino, iphalishi le-nokunye okufana nokolweni nesibindi, ikofi eluhlaza,
Isinaphi - isaladi yemifino neqanda elibilisiwe, ikhofi eluhlaza obisini,
Ukudla kwakusihlwa - isidlo semifino enenkukhu, itiye elimnyama,
Isidlo sesibili ingilazi ye-kefir.
Ibhulakufesi - isigaxa sasemuva, itiye eluhlaza,
Isidlo sasemini - izithelo ezisikiwe, ushizi wekhishi, itiye,
Isidlo sasemini - isobho elibilisiwe, utamatisi nesitshulu seqanda, inyama ebilisiwe,
Snack - jelly (kulungiselelwe ngokulandela iresiphi yesifo sikashukela), ama-2 ama-PC. amakhukhi we-fructose
Ukudla kwakusihlwa - iphalishi lebhali le-pearl enososo lwenyama,
Isidlo sesibili ingilazi ye-ryazhenka, i-apula elilodwa eliluhlaza.
Isidlo sasekuseni - ushizi wekhishi ngezithelo ezomile, itiye,
Isidlo sasemini - i-omelette eshisiwe, ikhofi eluhlaza enokhilimu,
Isidlo sasemini - isobho semifino, isisiki enamafutha nesaladi yemifino,
Isidlakela - itiye elinama-pancake labanesifo sikashukela,
Ukudla kwakusihlwa - ama-meatbread ku-utamatisi kasoso,
Isidlo sesibili ingilazi yeyogathi engafakiwe.
Ukudla kwasekuseni - isaladi yezithelo eyoliswe ngeyogathi engafakiwe,
Ukudla kwasekuseni kwesibili - ibhali leparele elinezicucu zezithelo ezomisiwe,
Isidlo sasemini - isobho selayisi elinsundu, iphalishi lebhali elinama-patties wesibindi,
Isidlo sasemini ntambama - isaladi yemifino neqanda elibilisiwe, itiye,
Ukudla kwakusihlwa - isitshalo seqanda esosiwe ebhakwe inkukhu eyosiwe, ikhofi eluhlaza ngo-ukhilimu,
Isidlo sesibili ingilazi ye-kefir, i-apula.
Ibhulakufesi - i-omelet eshisiwe, itiye elimnyama,
Isidlo sasemini - ushizi wekhishi, iparele elilodwa,
Isidlo sasemini - isobho semifino, inkukhu yezinkukhu, iphalishi le-buckwheat, itiye,
Ukudla okulula - itiye elinomshini wesifo sikashukela,
Ukudla kwakusihlwa - iphalishi lebhali ne-patty,
Isidlo sesibili ingilazi yeyogathi enamafutha amancane.
Ukudla kwasekuseni - iqanda elibilisiwe, ushizi we-tofu, itiye ngamabhisikidi efrijini,
Isidlo sasemini - isigaxa sodonga, ithanga elilodwa, itiye,
Isidlo sasemini - isobho ngebhali, amakhowe aphethwe inyama yenkomo,
Isidlo sasemini ntambama - isaladi yezithelo,
Ukudla kwakusihlwa - iphalishi le-buckwheat, ikhukhamba elibilisiwe,
Ibhulakufesi - itiye elinama-pancake labanesifo sikashukela,
Isidlo sasemini - i-omelette eshisiwe, isaladi yemifino,
Isidlo sasemini - isobho semifino, ilayisi elinsundu ngesibindi senkukhu ethosiwe.
Isidlakela - i-oatmeal ngezithelo ezomisiwe, itiye.
Ukudla kwakusihlwa - isidlo semifino, inhlanzi eshisiwe.
Isidlo sesibili ingilazi ye-ryazhenka, i-apula.
Unamathela ekudleni okunjalo, umuntu onesifo sikashukela ngeke alawule kuphela ushukela osegazini, kodwa futhi uzokwenelisa umzimba ngokugcwele ngamavithamini nangamaminerali.
Ukondliwa okufanele kungenye yezinto ezibalulekile zempilo yesifo sikashukela, okuzovimbela ukuguquguquka kwesifo sikashukela seqondo lesibili kuya ohlotsheni oluncike ku-insulin. Kepha itafula lokudla kufanele lihambisane neminye imithetho embalwa evela empilweni yesifo sikashukela.
I-100% utshwala nokubhema kufanele kungabandakanywa. Ngaphezu kweqiniso lokuthi utshwala bukhuphula kakhulu ushukela wegazi, kubuye kuhambisane nokubhema kubangele ukuphuma kwemithambo.
Ngakho-ke, kuyadingeka ukubandakanyeka ekwelashweni ngokomzimba nsuku zonke, okungenani imizuzu engama-45 ngosuku. Uma singekho isikhathi esanele sokuzivocavoca, khona-ke uhamba emoyeni omusha unxephezele ukungabi bikho kokuvivinya umzimba. Ungakhetha eyodwa yale midlalo:
Ngaphezu kwalokho, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ekulaleni okunempilo, isikhathi lapho kumuntu omdala kungamahora ayisishiyagalolunye. Isifo sikashukela kwesinye isikhathi sihlushwa ukuqwasha, futhi lokhu kuyithinta kabi impilo yabo. Uma inkinga enjalo ikhona, ungahamba ngezinyawo emoyeni omusha ngaphambi kokulala, uthathe amakhefu afudumele, kanye nezibani zephunga elikhanyayo egumbini lokulala. Ngaphambi kokulala, khipha noma yikuphi ukusebenza komzimba okusebenzayo. Konke lokhu kuzosiza ukuthatha umhlalaphansi ngokushesha.
Ukunamathela kokudla okufanele, ukuzikhandla ngokomzimba okulinganiselayo, ukulala kahle nokuntuleka kwemikhuba emibi, isiguli sikashukela singalulawula ushukela wegazi kalula futhi silondoloze ngokuphelele yonke imisebenzi yomzimba.
Ividiyo ekulesi sihloko inikeza izincomo ngokukhetha ukudla kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ishadi lesifo sikashukela: ukudla, ukudla
Yikuphi ukudla okungenakudliwa ngesifo sikashukela sohlobo 2? Ungayakha kanjani imenyu yansuku zonke enoshukela, osolwa ngayo noma ukukhuluphala? Isazi se-Endocrinologist u-Olga Demicheva ukhuluma ngokudla okunesifo sikashukela sohlobo lwesibili, okuyingxenye ebalulekile yokwelashwa, encwadini ethi "Isikhathi Isikhathi Sokuphathwa Ngokufanele".
Ngokungafani nohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-1 mellitus (T1DM), imvamisa akukho kudla okukhanyayo okuhambisana nokoma, ukuchama ngokweqile, ukunciphisa isisindo, noma ubuthakathaka obukhulu kuhlobo 2 sikashukela mellitus (T2DM). Imvamisa, lesi sifo sicishe sibe yiminyaka eminingana, ngakho-ke abantu abangaphezu kwengxenye abanesifo sikashukela emhlabeni abasazi isifo sabo. Futhi abazi ngayo kuze kube kuvela izinkinga zokuqala, noma baze bathola ngengozi isilinganiso sikashukela egazini.
Ukuhlolwa okwenziwe kahle kweziguli ezinesifo sikashukela esisanda kutholwa kwenza ukuthi kutholakale ukuthi ezinyangeni ezisanda kwedlula (iminyaka) baphawule ukukhathala okusheshayo, ukwehla okuncane kwamandla emisipha, ukuthambekela kokuchama ebusuku, ngaphezu kwalokho, abesifazane bangaphazanyiswa ukulunywa yi-perineum, futhi abesilisa - i-erectile dysfunction . Kodwa zonke lezi zimpawu zivame ukungabhekwa njengeziguli njengesizathu sokuya kudokotela.
Izindlela zokutholwa kwe-T2DM ekuhlaziweni kweglucose yegazi azihlukile kulezo ze-T1DM, kepha zineminyaka engaphezu kwengama-40, ukuba khona kokukhuluphala kwe-visceral, izimpawu zesifo sikashukela esijwayelekile futhi okujwayelekile (futhi ngezinye izikhathi amazinga aphakeme we-insulin angaphakathi angahlukanisa ngokweqiniso i-T2DM ne-T1DM.
Into esemqoka ukungadli indlala! Ukudla Kwesifo Sikashukela sohlobo 2
Ukudla kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kufanele kuqinisekise ukwenziwa kwesisindo somzimba, kungabangeli i-hyper- kanye ne-hypoglycemia, futhi kunciphise ubungozi be-atherosulinosis kanye ne-hypertension ye-arterial.
Ukudla kufanele kube njalo, kuphekwe izingxenyana ezincane (ngokwejwayelekile izidlo ezi-3 eziphambili nokudla okuphakathi kwesi-2) okuqukethe ikhalori yansuku zonke engaba ngu-1500 kcal. Ukudla kokugcina kuyimizuzu engama-40-60 ngaphambi kokulala ebusuku.
Isisekelo Sezondlo - ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi anenkomba ephansi ye-glycemic (GI), i.e. ekhuphuka kancane kancane ushukela wegazi, kufanele aze afike ku-50-60% wenani lomsoco.
Imikhiqizo eminingi ye-confectionery ine-GI ephezulu, iziphuzo ezinoshukela, ama-muffin, okusanhlamvu okuncane, kufanele kuqedwe noma kuncishiswe. Ama-GI aphansi anokusanhlamvu okuphelele, imifino, nezithelo ezicebile ku-fiber yokudla.
Inani eliphelele lamafutha akufanele libe ngaphezulu kwama-30% kokuqukethwe kilojoule, amafutha agcwele - 10%. Amafutha agciniwe kulula ukuwahlukanisa kusuka emafutheni angahlanganisiwe: Amafutha angenasisekelo anokungaguquguquki koketshezi emazingeni okushisa asekamelweni, futhi namafutha agcwele anokungaguquguquki okuqinile, angagawulwa ngommese bese esatshalaliswa ngesinkwa.
Njalo ukudla kufanele kufake inani elanele lamaprotheni ukuzinzisa i-glycemia futhi ihlinzeke ngezwi. Kunconywa ukuthi udle izinhlanzi okungenani izikhathi ezi-2 ngesonto. Imifino nezithelo kufanele kube khona ekudleni okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku. Izithelo ezimnandi (amagilebhisi, amakhiwane, ubhanana, izinsuku, ikhabe) kufanele zikhawulwe.
Ungagcwali ukudla. Zama ukuqinisekisa ukuthi inani le-sodium chloride alidluli ku-5 g ngosuku (ithisipuni elilodwa).
Utshwalanjengomthombo "wama-kilojoule angenalutho", isivuseleli sokudla, i-glycemic destabilizer, kufanele singafakwa ekudleni noma sincishiswe. Uma kungenakwenzeka ukuyeka utshwala, kufanele kunikezwe kuqala iwayini elibomvu elomile. Zama ukunciphisa umkhawulo wotshwala kumthamo owodwa ngosuku kwabesifazane noma ngababili kwabesilisa (umthamo owodwa = 360 ml kabhiya = i-150 ml yewayini = 45 ml yotshwala obunamandla).
Sebenzisa ama-antioxidants (amavithamini E, C, carotene) awanconywa, ngoba njengamanje akukho sisekelo sobufakazi bokusetshenziswa kwabo, kepha kungenzeka amathuba wemiphumela emibi yesikhathi eside.
Kunconywa ukugcina idayari yokudla, lapho baqopha khona ukuthi yini nokuthi kungakanani, kudliwe futhi kudakwe nini futhi kungani.
Kubalulekile yeka ukubhemaukunciphisa ubungozi bezinkinga zenhliziyo nomdlavuza.
Kufanele kuqashelwe ukuthi amasonto angama-2-3 ngemuva kokuyeka ukubhema, umsebenzi wama-receptors we-olgicory uyabuyiselwa, othinteka kancane kubabhemi. Ngenxa yalokhu, ukwanda kwesifiso sokudla ngenxa "yokuqiniswa" kwamakha wokudla kungenzeka. Leli qiniso lidinga ukuzithiba okukhethekile ukuvikela ukudla ngokweqile.
Lokhu yilokho "iphiramidi yokudla" ebukeka njengohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Imenyu yesonto nesifo sikashukela sohlobo 2
Kunconywa ukuthi ama-carbohydrate alula angabandakanywa ekudleni: ushukela (kufaka phakathi i-fructose), i-confectionery (amakhekhe, amaswidi, ama-sweet roll, amakhukhi we-gingerbread, u-ayisikhilimu, amakhukhi), uju, ukulondolozwa, amajusi wezithelo, njll. Yonke le mikhiqizo ikhuphula izinga ushukela wegazi futhi unikele ekuthuthukiseni ukukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, ukunciphisa ingozi ye-atherossteosis ethuthuka ngokushesha ku-T2DM, kunconyelwa ukukhipha amafutha ezilwane: inyama enamafutha, isinqathe, ibhotela, ukhilimu omuncu, ushizi onamafutha, ushizi, njll.
Ukusetshenziswa kwamafutha emifino nezinhlanzi ezinamafutha kufanele kuncishiswe: yize zingandisi ubungozi be-atherosclerosis, kodwa baneqhaza ekuqhubekeni kokukhuluphala. Nge-T2DM, ukukhuluphala yinkinga enkulu ebanga inkambo yesifo. Uma kudingeka izincomo ezengeziwe zokudla okunempilo, ngokwesibonelo, ezihambisana nomsebenzi wezinso ongasebenzi kahle noma ingozi eyengeziwe ye-gout, udokotela ohambelayo kufanele atshele la maphuzu.
Mina ngidla ibhulakufesi
i-denia) II ibhulakufesi Isidlo sasemini Itiye eliphakeme Ukudla kwakusihlwa Ukuhamba kwesikhathi
Mon Oatmeal emanzini ngaphandle kwebhotela noshukela noma isinkwa sikakhokho
ushizi wekotishi. Ikhofi noma itiye ngaphandle koshukela. Ijusi yetamatisi ngamabhisikidi. Isaladi leklabishi elisha (ukhukhamba, utamatisi) nge-limo
ujusi. Isobho elinemifino. Isinkwa Izinhlanzi elayisi. Umvukuzi
Al amanzi. I-Apple, amakhukhi angenazithelo, itiye ngaphandle koshukela. I-Vinaigrette. Lean inyama yenkomo nge-poppy
durum kusuka kukakolweni we-durum. Tea ngaphandle koshukela. Buckwheat
I-Neva porridge ngaphandle kawoyela (3-4 sto-
spoonfuls) noma isinkwa sikakhokho. Ingilazi ye-1% kefir.
ama-cutlets aphelele, isinkwa sokusanhlamvu. Ikhofi (itiye) ngaphandle koshukela. I-yogurt eshisayo enamafutha amancane ngamabhisikidi. Isaladi leklabishi elisha (ukhukhamba, utamatisi, ama-bulgarians -
upelepele) nejusi kalamula. Isobho le-Tomato Isinkwa Isifuba senkukhu nesitshulu semifino. Kwami
amanzi angempela. Peach, amakhukhi angenakuthunyelwa ku-inthanethi. Ukhukhamba. Veza nge-buckwheat
okungeyona iphalishi. Tea ngaphandle koshukela. Oatmeal nge
Ubisi lweKan noma i-1% kefir.
Wed Iqanda elibilisiwe. Ubhatata
welashwa kuhhavini (2 ama-PC.). Ikhofi (itiye) ngaphandle koshukela. I-apula. Isaladi yamaGrikhi. Lenten borsch. Isinkwa Sokusanhlamvu Inyama enobisi
upelepele (onenkomo nelayisi). Kwami
amanzi angempela. Ama-coer crackers ngesiphuzo sezithelo. Turkey ibele ngekholifulawa. Tea ngaphandle koshukela. Muesli no
IKhan ye-1% kefir noma ubisi.
Th Ushizi onama-jam ku-xylitol. Ikhofi (itiye) ngaphandle koshukela. Ijusi yemifino enamakhukhi angenakuthunyelwa kuwo. Isaladi lamakhukhamba amasha nejusi kalamula. Isobho seklabishi Isinkwa Sokusanhlamvu I-Bakla-
jean ngenyama. Kwami
amanzi angempela. I-100 g yama-cherries Iwayini
Gret, inkukhu cutlets (umusi). Tea ngaphandle koshukela. 2 izingcezu zesinkwa. Ingilazi ye-1% kefir noma ubisi.
Fri I-Millet porridge emanzini ngaphandle kwebhotela noshukela noma isinkwa sikakolweni ngomlotha
ushizi we-cottage shizi (feta ushizi). Ikhofi (itiye) ngaphandle koshukela. Iphethini le-Berry namabhisikidi. Isaladi leSauerkraut. Isobho seVermiche
kwesokunxele esitokweni senkukhu. Isinkwa Isifuba senkukhu nelayisi. Kwami
amanzi angempela. Amakhukhi e-pear, angenasisekelo. Isaladi leklabishi elisha. Izinhlanzi ezinamafutha aphansi nge
amazambane. Tea ngaphandle koshukela. Buckwheat
nezinkezo zokudoba). Sta-
kan 1% kefir noma i-ayran.
Sat I-omelet yeqanda elilodwa. Isinkwa esidliwayo esinoshizi we-feta. Khofi ngobisi olunoshukela noma itiye. Monkey -
iyogathi engenalo ushukela. Amakhukhi angenazimpawu. Isaladi lamatamatisi no-anyanisi, 1 ithisipuni lomnqumo
uwoyela, usawoti. Isobho seSolyanka kumhluzi oswelayo. Isinkwa Faka inyama ngemifino. Kwami
amanzi angempela. I-Watermelon (isilayi esingu-1). Ama-cutlets we-Veal nge-lentil. Imifino emisha. Itiye le-Marma elingaphendulwanga
kulungile ku-xylitol. Ama-Cread Creadal Roll. Ingilazi ye-1% kefir.
ILanga Iphalishi lebhali. Ushizi wekotishi onamafutha amancane. Khofi ngobisi olunoshukela noma itiye. I-peas eluhlaza ene-1 isipuni sanoma yisiphi isinkwa. I-Bakla-
jean ngegalikhi (amafutha aphansi). Isobho se-noodle yenkukhu. Isinkwa Inkukhu offal nge-buckwheat
I-Neva porridge nemifino. Kwami
amanzi angempela. I-Apple noma izingcezu ezinosikiwe, ezibhakiwe
amalungu kuhhavini (ushukela wamahhala). Izinhlanzi ezinamafutha aphansi elayisi. Utamatisi, ukhukhamba, imifino. I-oatmeal engenashukela enobisi olubilisiwe olubilisiwe.
Umsebenzi wenyama ku-T2DM
Ukuzivocavoca okuphansi komzimba (ukuntuleka kokuzivocavoca) kuyisitha esibulalayo sabantu abaphumelelayo. Ukuzivocavoca umzimba njalo kubalulekile ekwelapheni ukukhuluphala, ukwehlisa i-hyperglycemia, kufane nomfutho wegazi, kanye nokuvikela isifo senhliziyo.
Nge-T2DM, ukulwa nokungasebenzi ngokomzimba kufanelekile ikakhulukazi. Iqiniso ngukuthi nge-hypodynamia, izicubu ziyeka ukusebenzisa i-glucose ngenkuthalo, futhi zigcinwa ngesimo samafutha. Amafutha amaningi anqwabelana, kwehlisa ukuzwela kwamangqamuzana ku-insulin. Kufakazelwa ukuthi kuma-25% abantu abahola impilo yokuhlala, ungathola ukumelana ne-insulin.
Ukusebenza njalo kwemisipha ngokwayo kuholela ekuguqukeni kwe-metabolic okwehla kokumelana ne-insulin. Ukufeza umphumela wokwelapha, kwanele ukuzijwayeza ukuhamba nsuku zonke ngemizuzu engama-30 noma izikhathi ezingama-3-4 ngesonto ukufeza ukugijimisa okuyimizuzu engama-20-30, mhlawumbe amahora angama-1-1,5 ngemuva kokudla, okusiza ukunciphisa ukumelana ne-insulin kanye nokulawulwa okungcono kwe-glycemic.
Ungaqhuba "isivivinyo" esizimele usebenzisa i-glucometer yasendlini, futhi uqaphele ukuthi i-glycemia iyancipha kanjani ngemuva kwemizuzu engu-15 yokusebenza ngokomzimba.
Kuyini i-XE nokuthi ungayibala kanjani?
I-XE noma i-Bread unit ingenye indlela yokubala ama-carbohydrate. Igama livela engxenyeni yesinkwa "yezitini", etholakala ngokusika isinkwa sibe yizicucu, bese kuthi ngesigamu: siyisigaxa esingu-25 gram esiqukethe 1 XE.
Ukudla okuningi kuqukethe ama-carbohydrate, kuyilapho onke ehluka ngokwakhiwa, izakhiwo nokuqukethwe kwekhalori. Kungakho kunzima ukunquma inani lezinsuku zonke lokujwayelekile kokudla, okubalulekile kwiziguli ezithembele ku-insulin - inani lama-carbohydrate asetshenzisiwe kumele ahambisane nomthamo we-insulin olungiselelwe.
Lolu hlelo lokubala lungelwamanye amazwe futhi likuvumela ukuba ukhethe umthamo odingekayo we-insulin. I-XE ikuvumela ukuthi unqume ingxenye yama-carbohydrate ngaphandle kokukala, kepha ngosizo lokubonakala kanye nemiqalo yemvelo efanelekayo ngokubona (ucezu, ucezu, ingilazi, isipuni, njll.). Uma eseqikelele ukuthi ingakanani i-XE ezodliwa kumthamo owodwa kanye nokulinganisa ushukela wegazi, isiguli esine-insulin exhomeke kwisifo sikashukela singanikeza umthamo ofanele we-insulin ngesenzo esifushane ngaphambi kokudla.
I-1 XE iqukethe cishe amagremu ayi-15 ama-carbohydrate angagaya,
ngemuva kokudla i-1 XE, izinga likashukela wegazi likhuphuka ngo-2.8 mmol / l,
ukuthathwa kwe-1 XE, amayunithi ama-2 ayadingeka. insulin
isibonelelo semihla ngemihla: I-18-25 XE, ngokusatshalaliswa kokudla okungu-6 (ukudla okulula e-1-2 XE, ukudla okusemqoka ku-3-5 XE),
I-1 XE ngu: 25 gr. isinkwa esimhlophe, 30 gr. isinkwa esinsundu, uhhafu wengilazi ye-oatmeal noma i-buckwheat, i-apula eliphakathi nendawo, 2 ama-pcs. ama-prunes, njll.
Ukudla okuvunyelwe futhi okuvame ukusetshenziswa
Uma udla ngesifo sikashukela - ukudla okuvunyiwe kuyiqembu elingadliwa ngaphandle komkhawulo.
I-Low GI: Isilinganiso se-GI:
anyanisi oluhlaza, dill,
Ama-Brussels amahlumela, ukholifulawa, iklabishi elimhlophe,
ushokoledi omnyama ongama-70%,
uphizi oluhlukanisiwe ophuzi,
ama-berry marmalade (mahhala ushukela),
i-berry jam (mahhala ushukela),
iyogathi yemvelo engenawo fat,
uphizi owomile oluhlaza
ujusi we-apula wemvelo,
iphalishi yommbila (mamalyga),
uphizi omusha oluhlaza,
ujusi wepayinaphu yemvelo,
ujusi wamagilebhisi wemvelo,
ujusi wemvelo wamagilebhisi
isinkwa esibhakiwe, ama-pancake ama-buckwheat,
Imikhiqizo enomugqa we-GI - kufanele inciphiswe kakhulu, futhi kwisifo sikashukela esinzima, okulandelayo kufanele kungafakwa:
ummbila omnandi othosiwe,
uphizi omhlophe nezitsha ezivela kuwo,
ubhontshisi omnyama nezitsha ezivela kuwo,
amakhukhi wesinkwa esifushane
i-oatmeal, i-oat granola,
iziphuzo ezimnandi ze-carbonated.
Ushukela ocwengekile uqobo ubhekisela imikhiqizo ene-GI evamile, kepha ngenani lomngcele. Lokhu kusho ukuthi ngokweqile kungadliwa, kepha ukumuncwa koshukela kwenzeka ngokushesha, okusho ukuthi ushukela wegazi nawo ukhuphuka ngokushesha. Ngakho-ke, ngokweqiniso, kufanele kulinganiselwe noma kungasebenzisi nhlobo.
Ukudla okuphezulu kwe-GI (Kuvinjelwe) Eminye imikhiqizo enqatshelwe:
i-granola enamantongomane nezomisiwe,
isinkwa esimhlophe, isinkwa selayisi,
iphalishi welayisi osheshayo,
i-parsnip nemikhiqizo evela kuyo,
noma iyiphi i-muffin emhlophe,
ufulawa wokusanhlamvu nezitsha ezivela kuwo,
amaswidi, amakhekhe, namakhekhe,
ama-curds amnandi, ama-curds,
ummbila, imephu, isiraphu kakolweni,
ubhiya, newayini, i-cocktails yotshwala,
ngamafutha anengxenye ye-hydrogenated (ukudla okuneshelufu ende, ukudla okusemathinini, ukudla okusheshayo),
inyama ebomvu nenamafutha (ingulube, idada, ihansi, iwundlu),
inhlanzi enamafutha nenosawoti,
ukhilimu, i-yogurt enamafutha,
amasoso (imayonesi, njll),
izinongo ezinuka kamnandi.
Ilayisi elimhlophe Irayisi elinsundu
Amazambane, ikakhulukazi ngesimo samazambane abunjiwe kanye nophizi I-Jasm, amazambane amnandi
Ipasta egcwele I-pasta kusuka kufulawa we-durum nokugaya okuhlanganayo.
Isinkwa esimhlophe Isinkwa esenziwe nge-peeled
Izikebhe zommbila Amagatsha
Amakhekhe, namakhekhe Izithelo namajikijolo
Inyama ebomvu Inyama yokudla emhlophe (unogwaja, isudu), inhlanzi enamafutha amancane
Amafutha ezilwane, amafutha e-trans Amafutha emifino (odlwenguliwe, wefilakisi, umnqumo)
Umhluzi wenyama ogosiwe Izobho zokukhanya kumhluzi wesibili wokudla inyama
Ushizi wamafutha I-Avocado, ushizi onamafutha aphansi
Ushokoledi wobisi Ushokoledi omnyama
U-ayisikhilimu Izithelo Ezifakwe Iziswebhu (I-Cream Ice Cree)
Ikhilimu Ubisi olungafakwanga
Ithebula 9 likashukela
I-Diet No. 9, eyenzelwe ngokukhethekile isifo sikashukela, isetshenziswa kabanzi ekwelapheni iziguli ezinjalo futhi kufanele ilandelwe ekhaya. Yakhiwa ngusosayensi waseSoviet uM. Pevzner. Ukudla sikashukela kufaka phakathi ukudonsa nsuku zonke okufika ku:
80 gr. imifino
300 gr izithelo
1 inkomishi yezithelo zemvelo
500 ml wemikhiqizo yobisi, 200 g ushizi we-cottage shizi,
100 gr. amakhowe
300 gr inhlanzi noma inyama
100-200 gr. i-rye, ukolweni oxutshwe nefulawa ye-rye, isinkwa se-bran noma amagremu ama-200 amazambane, okusanhlamvu (kuqediwe),
40-60 gr. amafutha.
Amasobho: isobho seklabishi, imifino, i-borsch, i-beetroot, inyama nemifino okroshka, inyama elula noma umhluzi wezinhlanzi, umhluzi we-mushroom onemifino nezinhlamvu.
Inyama, inkukhu: i-veal, unogwaja, umqhele, ibilisiwe, inkukhu ethosiwe.
Izinhlanzi: ukudla kwasolwandle okunamafutha amancane nenhlanzi (i-pike perch, i-pike, i-cod, i-saffron cod) kubilisiwe, umusi, isitshulu, kubhakwe ngohlobo lwayo lwejusi.
Ukudla okulula: i-vinaigrette, inhlanganisela yemifino emifino emisha, i-caviar yemifino, i-herring ofakwe usawoti, inyama enokudla yokudla nenhlanzi, isaladi lokudla kwasolwandle ngebhotela, ushizi ongafakwanga.
Amaswidi: ama-dessert enziwe ngezithelo ezintsha, amajikijolo, ijeli yezithelo ngaphandle koshukela, i-berry mousse, i-marmalade ne-jam ngaphandle koshukela.
Iziphuzo: ikofi, itiye, ubuthakathaka, amaminerali amanzi ngaphandle kwegesi, imifino kanye nejusi yezithelo, umhluzi we-rosehip (ushukela ongenawo ushukela).
Izitsha zeqanda: i-omelet yamaprotheni, amaqanda abiliswe kancane, ezitsheni.
Ibhulakufesi Amaphrotheni omelet nge-asparagus, itiye. Loose i-buckwheat ngamafutha yemifino kanye noshizi wephunga.
2 ibhulakufesi Isaladi le-squid ne-apula nge-walnut. Isaladi lekherothi entsha.
Isidlo sasemini IBeetroot, isitshalo seqanda ebhakwe ngembewu yamapomegranate.
Isobho lemifino, imifino yenyama enamazambane ejazi lebhantshi. I-apula elilodwa.
Isidlakela I-sandwich eyenziwe ngesinkwa se-rye nge-avocado. I-Kefir exutshwe namajikijolo amasha.
Ukudla kwakusihlwa I-Baked salmon steak ne-anyanisi eluhlaza. Inhlanzi ebilisiwe neklabishi elihanjisiwe.
Ibhulakufesi I-Buckwheat obisini, ingilazi yekhofi. Hercules iphalishi. Itiye nobisi.
2 ibhulakufesi Isaladi lezithelo. Ushizi wasekhishini ngama-apricots amasha.
Isidlo sasemini Ukhukhamba kumhluzi wesibili wenyama. Isaladi lokudla kwasolwandle. I-Veorsarian borscht. I-Turkey inyama goulash namamilo.
Isidlakela Ushizi ongagundiwe nengilazi ye-kefir. Imibhida yeklabishi yemifino.
Ukudla kwakusihlwa Bhaka imifino enama-turkey afrayiwe. Izithelo ezomisiwe ngaphandle koshukela. Iqanda elibilisiwe.
Ibhulakufesi I-oatmeal nge-apula yashizi futhi enoshukela nge-stevia, ingilazi yeyogathi engenashukela. Ushizi ophansi onamafutha amancane notamatisi. Tea
2 ibhulakufesi I-apricot smoothie entsha enamajikijolo. I-vinaigrette yemifino kanye nezingcezu ezi-2 zezinkwa ezi-peeled.
Isidlo sasemini Isitshulu se-veal esikhethiwe semifino. Isobho lebhali le-pearl ibhali enobisi. Imimese yenyama yenkomo.
Isidlakela Ushizi wekotishi ngokufakwa kobisi. Izithelo zifakwe ubisi.
Ukudla kwakusihlwa Isaladi ithanga elisha, izaqathi kanye nethanga. I-Broccoli e-Braised enamakhowe.
Ibhulakufesi I-Burger eyenziwe ngesinkwa esiphelele sokusanhlamvu, ushizi onamafutha amancane notamatisi. Iqanda elibilisiwe. Ingilazi ye-chicory nobisi.
2 ibhulakufesi Imifino ethosiwe nge-hummus. Izithelo namajikijolo, kushayiwe nge-kefir blender.
Isidlo sasemini Isobho elinemifino nge-celery nethanga eliluhlaza. Inqumama yenkukhu ehlanganisiwe ngesipinashi. Isobho seklabishi yemifino. I-Barley porridge ngaphansi kwejazi lezinhlanzi.
Isidlakela Amapheya agxishwe ngama-alimondi aluhlaza. I-Zucchini caviar.
Ukudla kwakusihlwa Isaladi nge-pepper neyogathi yemvelo. Amabele enkukhu abilisiwe nge-isitshalo seqanda ne-coulry goulash.
Ibhulakufesi I-Steam puree kusuka kuma-plums amasha ngesinamoni kanye ne-stevia. Bopha ikofi nesinkwa soya. Izinhlamvu ezakhiwe nge yoghur yemvelo nesinkwa. Ikhofi
2 ibhulakufesi Isaladi ngeqanda elibilisiwe ne-caviar yemvelo squash. Berry Jelly.
Isidlo sasemini Isobho ukholifulawa kanye ne-broccoli. Inyama yenkomo enama-arugula notamatisi. Umhluzi Mushroom ngemifino. Ama-Meatballs ane-zucchini ethosiwe.
Isidlakela Ushizi wekotishi onamafutha aphansi nge-berry sauce. Ingilazi yetiye eluhlaza. I-apula elilodwa.
Ukudla kwakusihlwa Izimbaza ezinama-Steamed kanye nama-meatballs ezinhlanzi ku-green yemvelo usoso. Isaladi ne-utamatisi, amakhambi kanye ne-cottage shizi.
Lo mbuzo uhlala unempikiswano, ngoba abanaso isidingo esikhulu sesiguli sikashukela, futhi bazisebenzisa kuphela ngenhloso yokwanelisa abakuthandayo futhi umkhuba wokudla izitsha neziphuzo. Izikhundla ezinoshukela zokwenziwa kanye nezemvelo ezinamaphesenti ayikhulu afakazelwe ukuphepha ngokomthetho azikho. Isidingo esiyinhloko kubo ukuntuleka kokukhula koshukela wegazi noma ukwanda okuncane kwesikhombi.
Njengamanje, ngokulawulwa okuqinile kashukela wegazi, i-50% fructose, i-stevia noju kungasetjenziswa njengoshukela.
IStevia yisengezo esivela emaqabungeni esitshalo esingapheli, i-stevia, sithatha ushukela ongenawo amakhalori. Lesi sitshalo sakha ama-glycosides amnandi, anjenge-stevioside - into enikeza amaqabunga futhi ibambe ukunambitheka okumnandi, izikhathi ezingama-20 zinoshukela omningi. Kungangezwa ekudleni okulungiselelwe noma kusetshenziswe ekuphekeni. Kukholelwa ukuthi i-stevia isiza ukubuyisela ama-pancreas futhi isiza ukuzakhela i-insulin yayo ngaphandle kokuthinta ushukela wegazi.
Kwavunywa ngokusemthethweni njenge-sweetener ngabachwepheshe be-WHO ngonyaka we-2004. Isimo sansuku zonke sifinyelela ku-2.4 mg / kg (akukho ngaphezu kwe-1 isipuni ngosuku). Uma isengezo sihlukunyezwa, kungaba nemiphumela enobuthi nokuphendula komzimba. Kutholakala ngefomu le-powder, ama-extracts awuketshezi kanye nama-syrups ajwayelekile.
I-Fructose 50%. Ukuze uthole i-metabolism ye-fructose, i-insulin ayidingeki, ngakho-ke, kulokhu, kuphephile. Inokuqukethwe okungama-kilojoule okuphindwe kabili izikhathi nobumnandi obuphindwe izikhathi eziyi-1.5 uma kuqhathaniswa noshukela ojwayelekile. Ine-GI ephansi (19) futhi ayibangeli ukukhula ngokushesha koshukela wegazi.
Izinga lokusetshenziswa alikho ngaphezu kwe-30-40 gr. ngosuku. Lapho kudliwe okungaphezu kwama-50 gr. i-fructose ngosuku inciphisa ukuzwela kwesibindi kuya ku-insulin. Kutholakala ngesimo se-powder, amaphilisi.
Uju lwenyosi lwemvelo. Kuqukethe i-glucose, i-fructose kanye nengxenye encane ye-sucrose (1-6%). I-insulin iyadingeka ukuthola i- metabolism ye-sucrose, noma kunjalo, okuqukethwe kwalesi ushukela kuju akuncane, ngakho-ke, umthwalo osemzimbeni omncane.
Ucebile ngamavithamini kanye nezinto ezisebenzayo, kuyandisa amandla omzimba. Ngakho konke lokhu, kungumkhiqizo we-carbohydrate ophakeme kakhulu onama-GI aphezulu (cishe angama-85). Ngama-degrees amancane kashukela, izikebhe zewashi ezi-1-2 zoju ngetiye ngosuku ziyamukeleka, ngemuva kokudla, ukuncibilikisa kancane, kepha kungangezi isiphuzo esishisayo.
Izithasiselo ezinjenge-aspartame, i-xylitol, i -ultlamate ne-saccharin okwamanje azinconywa ngabasebenza nge-endocrinologists ngenxa yemiphumela emibi kanye nobunye ubungozi.
Kufanele kuqondwe ukuthi isilinganiso sokufakwa kwe-carbohydrate, kanye nokuqukethwe ushukela emikhiqizweni kungahluka kusuka kumanani abaliwe wesilinganiso. Ngakho-ke, kubalulekile ukulawula ushukela wegazi ngaphambi kokudla kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla, gcina idayari yokudla futhi ngaleyo ndlela uthole imikhiqizo ebangela ukweqa komuntu ngamunye kushukela wegazi. Ukubala i-GI yokudla okulungele, kulula kakhulu ukusebenzisa umshini wokubala okhethekile, ngoba inqubo yokupheka nezinye izithasiselo ezahlukahlukene zingandisa kakhulu izinga lokuqala le-GI yemikhiqizo yokuqala.
Odokotela bayazi ngesidingo sokudla kwesifo sikashukela isikhathi eside - bekungukudla kwezempilo esikhathini sangaphambi kwe-insulin okuwukuphela kwendlela ephumelelayo yokulwa nale nkinga. Ukudla kwesifo sikashukela sohlobo loku-1 kubaluleke kakhulu, lapho kunamathuba amaningi aphezulu wokuwoxeka ngesikhathi sokubola ngisho nokufa. Kwabanesifo sikashukela sohlobo lwesibili lwesifo, ukondliwa kwemitholampilo kuvame ukunqunyelwa ukulungisa isisindo nenkambo yesifo esitebekayo.
Imikhiqizo enqatshelwe ngokuphelele sikashukela
Izindlela zokudla zesimanje, ezihlome ngezindlela ezisezingeni eliphakeme zokuxilonga nokucwaninga ngemiphumela yezinto nemikhiqizo emzimbeni, eminyakeni yamuva nje zinciphise kakhulu uhlu lokudla olungavunyelwe ngokuphelele lweziguli ezinesifo sikashukela. Okwamanje, izitsha ezisuselwa kuma-carbohydrate acwengekile, amaswidi noshukela, kanye nemikhiqizo equkethe amafutha anciphisayo kanye ne-cholesterol eningi, iyaphikisana ngokuphelele.
Kukhonavinjelwe okulinganiselwe kwesinkwa esimhlophe, ilayisi ne-semolina, kanye ne-pasta - zingakhawulelwa ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lwesifo sikashukela, utshwala buphikisana ngokuphelele.
Izinhlobo Zokudla Ushukela
I-Classic. Lolu hlobo lokudla okwenziwe ngezokwelapha lwakhiwa emuva eminyakeni engama-30 ukuya kwengama-40 yekhulu lamashumi amabili futhi luhlobo lokudla olulinganiselayo nolungejwayelekile. Ummeleli ocacile waso ekudleni kokudla kwaseRussia iTafula No. 9 ngokuhlukahluka okuningi kwakamuva. Lolu hlobo lokudla kwezokwelapha lufanelekile cishe kubo bonke abantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Okwesimanje. Izimiso zokuzenzela kanye nokuqonda kwamaqembu ezenhlalo ngazinye kwaholela kumamenyu ahlukahlukene nokudla kwanamuhla, okunqatshelwe okungatheni ngezinhlobo ezithile zokudla futhi kucatshangelwa izakhiwo ezintsha ezitholakala kokugcina, okuvumela ukwethulwa kwemikhiqizo eyayivinjelwe ngaphansi kokudla ekudleni kwansuku zonke. Imigomo eyinhloko lapha yisici sokusetshenziswa kwama-carbohydrate "avikelwe" aqukethe inani elanele le-fiber yokudla. Kodwa-ke, kufanele kuqondwe ukuthi lolu hlobo lokudla kwezokwelapha lukhethwe ngokuqondile futhi alunakubhekwa njengenqubo yendawo yokubuyiswa kwe-carbohydrate metabolism.
Ukudla okuphansi kwe-carb. Yakhelwe ikakhulu abanesifo sikashukela sohlobo II abanesisindo somzimba esikhulayo. Umgomo oyisisekelo ukukhipha ukusetshenziswa okuningi kokudla okuphezulu kuma-carbohydrate, kepha hhayi ukulimaza impilo. Kodwa-ke, i-contraindicated ezinganeni, futhi futhi angeke isetshenziselwe abantu abanezinkinga zezinso (sekwedlule isigaba nephropathies) kanye nabanesifo sikashukela ngohlobo 1 sikashukela kanye ne-hypoglycemia enkulu.
Ukudla kwemifino. Njengoba izifundo zokuhlola zibonisile ekuqaleni kwekhulu lama-20, izinhlobo zama-vegan zokudla okugcizelelwa ekunciphiseni okukhulu kokudla okugcwele amafutha, hhayi nje kuphela ezinegalelo ekulahlekelweni kwesisindo, kepha futhi noshukela wegazi ophansi. Inani elikhulu lezimila lonke, elinothile ngokudla kanye nefayibha yokudla, kwezinye izikhathi lisebenza ngempumelelo kakhulu kunokudla okunconyiwe okukhethekile, ikakhulukazi ukudla okwenziwe ngemifino kusho ukwehla okukhulu kokuqukethwe kwekhalori okuphelele kokudla kwansuku zonke. Lokhu, kunciphisa kakhulu ingozi ye-metabolic syndrome ezimweni zangaphambi kwesifo sikashukela, ikwazi ukwenza njengeprophylactic ezimele futhi ilwe ngempumelelo nokuqala kwesifo sikashukela.
Imenyu yansuku zonke
Ngezansi, sibheka imenyu yokudla yasendulo yabanesifo sikashukela sohlobo loku-1 nolwe-2 lwesifo, elungele iziguli ezinesifo sikashukela esimnene nesilinganiselayo. Endabeni yokubola okukhulu, ukuthambekela ne-hyper- kanye ne-hypoglycemia, uhlobo lokudla oluqondene nomuntu uqobo kufanele luthuthukiswe ngumuntu onakekela izondlamzimba kucatshangelwa ukuqina komzimba womuntu, izinkinga zempilo ezikhona kanye nezinye izinto.
Amaprotheni - 85-90 amagremu (amaphesenti angamashumi ayisithupha emvelaphi yezilwane).
Amafutha - amagremu angama-75-80 (okwesithathu - isisekelo sesitshalo).
Ama-carbohydrate - 250-300 amagremu.
Uketshezi wamahhala - cishe ilitha nengxenye.
Usawoti ngu-11 amagremu.
Uhlelo lwamandla luphazamisekile, amahlandla ayisihlanu kuya kweziyisithupha ngosuku, inani lamandla lamandla lansuku zonke lingaphezu kuka-2400 kcal.
Imikhiqizo / Izitsha ezivunyelwe:
Imikhiqizo yeflash - i-rye nesinkwa se-bran evunyelwe, kanye nemikhiqizo kafulawa engafinyeleleki.
Isobho - indawo efanelekile yokudla kwe-borscht, isobho seklabishi, isobho zemifino kanye nesobho elinomhluzi onamafutha amancane. Kwesinye isikhathi i-okroshka.
Inyama. Izinhlobo ezinamafutha amancane wenkomo, i-veal, ingulube. Inkukhu enomkhawulo, unogwaja, iwundlu, ulimi olubilisiwe nesibindi kuvunyelwe. Okusuka ezinhlanzini - noma yiziphi izinhlobo ezingekho emafutheni ngamafomu abilisiwe, enziwe noma aphekwe ngaphandle kwamafutha zemifino.
Imikhiqizo yobisi. Ushizi onamafutha amancane, imikhiqizo yobisi ngaphandle koshukela ongeziwe. Kunqunyelwe - amaphesenti ayi-10 ukhilimu omuncu, ophansi onamafutha amancane noma onesibindi. Amaqanda adla ngaphandle kwama-yolks, ezimweni ezinzima ngokweqile, ngendlela yama-omelet.
Izihlobo. I-Oatmeal, ibhali, ubhontshisi, ama-buckwheat, amaqanda, amabele.
Imifino. Izaqathi ezinconyiwe, beet, iklabishi, ithanga, zucchini, isitshalo seqanda, ukhukhamba notamatisi. Ubhatata - kulinganiselwe.
Imilambo nososo. Isaladi yemifino entsha, utamatisi nososo olunamafutha amancane, i-horseradish, lwesinaphi nepelepele. Inqunyelwe - u-squash noma enye i-caviar yemifino, i-vinaigrette, inhlanzi enamafutha, izitsha zasolwandle ezinamafutha amancane yemifino, ama-jellies wenyama enamafutha amancane.
Amafutha - akhawulelwe kwimifino, ibhotela kanye ne-ghee.
Okuxubile. Iziphuzo ezingenawo ushukela (itiye, ikofi, umhluzi we-rosehip, isiphuzo semifino), ujeli, ama-mousses, izithelo ezintsha ezimnandi nezinambitheki ezingekho ngaphandle, kumakhompiyutha. Kukhawulelwe kakhulu - uju namaswidi kuma-sweeteners.
Sizoba nesidlo sasekuseni ngamagremu amabili koshizi onamafutha aphansi, ongangeza kuwo amajikijolo ambalwa.
Okwesibili sidla isidlo sasekuseni ngengilazi eyodwa yephesenti elilodwa kefir.
Sidla isidlo sasemini ngama-gramu ayi-150 enkomo ebhakwe, ipuleti lesobho lemifino. Kuvunwe - imifino eboshiwe ngenani lama-100-150 amagremu.
Iba nesaladi ntambama ne-saladi entsha yeklabishi namakhukhamba, egcotshwe ne-isipuni samafutha omnqumo. Umthamo ophelele ungama-100-150 amagremu.
Sizoba nesidlo sakusihlwa ngemifino eyosiwe (amagremu angama-80) nenhlanzi eyodwa ephakathi ebhakwe enesisindo esingaba amagremu angamakhulu amabili.
Sidla isidlo sasekuseni nge-porridge ye-buckwheat - akukho ngaphezu kwama-gramu ayi-120.
Okwesibili sinesidlo sasekuseni ngama-apula amabili asayizi ephakathi.
Sidla epuletini le-borsch yemifino, amagremu ayi-100 yenkomo ebilisiwe. Ungaphuza ukudla nge-compote ngaphandle kokufaka ushukela.
Yiba nengilazi yantambama yomhluzi ovela emahlangeni we-rose.
Sidla isidlo sakusihlwa ngesitsha sesaladi yemifino emisha elingama-gramu ayi-160-180, kanye nenhlanzi eyodwa ebilayo enamafutha amancane (amagremu ayi-150-200).
Sidla ukudla kwasekuseni nge-cottage shizi casserole - 200 amagremu.
Ngaphambi kwasemini, ungaphuza ingilazi yomhluzi kusuka okhalweni lwe-rose.
Sidla epuletini lesobho seklabishi, ama-patties amabili amancane ezinhlanzi kanye namagremu ayikhulu wesaladi yemifino.
Yiba nesidlo sasemini neqanda elilodwa elibilisiwe.
Ukudla kwakusihlwa kuyipuleti leklabishi elihanjisiwe kanye nama-patties amabili aphakathi enyama aphekwe kuhhavini noma ebanjiwe.
Sidla ukudla kwasekuseni nge-omelet evela emaqanda amabili.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa, ungadla inkomishi yeyogathi yokuqukethwe kwamafutha amancane noma i-unsweetened.
Sidla isidlo sasemini nesobho seklabishi kanye namayunithi amabili epeleti agxiliwe ngokususelwa enyameni esivumayo futhi sivumele amabele
Sine-snack yasemini enamagremu angamakhulu amabili we-casserole kusuka ku-fat-low cottage shizi kanye izaqathi.
Sidla isidlo sakusihlwa nenyama yenkukhu ethosiwe (ucezu lwamagremu angamakhulu amabili) kanye nohlu lwesaladi yemifino.
Sizodla ibhulakufesi ne-plate of millet porridge ne-apula elilodwa.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa, yidla amawolintshi aphakathi nendawo.
Sidla isidlo sasemini ngenyama goulash (engadluli kumagremu ayikhulu), ipuleti lesobho lezinhlanzi kanye nepuleti yebhali.
Iba nesidlo santambama nesipuleti sesaladi yemifino entsha.
Sidla isidlo sakusihlwa ngengxenye enhle yemifino ekhishwe ngamawundlu, enesisindo esingama-gramu ayi-250.
Sizoba nesidlo sasekuseni ngo -cwecwe wephalishi osuselwa ku-bran, ipheya elilodwa lingadliwa ngokulunywa.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa, kuvunyelwe ukudla iqanda elilodwa elibilisiwe.
Sidla kupuleti enkulu yesitshulu semifino ngokufakwa kwenyama ebondayo - amagremu angama-250 kuphela.
Iba isidlo sasemini ngezithelo ezimbalwa ezivunyelwe.
Sizobe sidla isidlo sakusihlwa ngamagremu ayikhulu ewundlu elihlotshisiwe nepuleti lesaladi yemifino elingama-gramu ayi-150.
Ukudla kwasekuseni ngesitsha soshizi ophansi onamafutha amancane ngenani elincane lamajikijolo - kuze kufike kumagremu ayikhulu.
Kwasemini, amakhulu amabili amagremu enkukhu eyosiwe.
Sidla isidlo sasemini ngesitsha sesobho yemifino, amagremu ayikhulu e-goulash nesitsha sesaladi yemifino.
Iba nepuleti ntambama lesaladi le-berry - lifinyelela kumagremu ayi-150 isiyonke.
Sizobe sidla isidlo sakusihlwa ngamagremu ayikhulu ebhontshisi abilisiwe kanye namagremu angamakhulu amabili eshizi.
Kungenzeka yini ukudla ngesifo sikashukela: amantongomane, amabhungane, ilayisi, ama-Persimmons, amapomegranati kanye namathanga?
Ilayisi alikwazi ukudliwa. Amantongomane (ama-walnuts, amantongomane, ama-alimondi, umsedari) - kungenzeka, kepha ngesilinganiso esilinganiselwe (kuze kufike ku-50 amagremu ngosuku), ngaphambili akhanywa ngegobolondo nezinye izinto. Ungasebenzisa ama-beets kashukela ngesimo abilisiwe, uwusebenzise, ​​ngokwesibonelo, njengengxenye ye-vinaigrette - akukho ngaphezu kwama-gramu ayi-100 ngosuku.
I-Persimmon ingumkhiqizo onenkomba ye-glycemic ephezulu, kepha iqukethe inani elikhulu lezakhamzimba futhi ayithinti amazinga kashukela kangako, ngoba iqukethe ikakhulu i-fructose. Ungasebenzisa, kepha ngobuningi obunqunyelwe, hhayi ngaphezu kwesithelo esisodwa kanye ezinsukwini ezimbalwa.
Ithanga lifakwa "kuhlu oluhlaza" lwesifo sikashukela futhi lungasetshenziswa ngaphandle kwemikhawulo ekhethekile (umkhawulo kuphela wokuqukethwe kwekhalori yonke yemenyu). I-Pomegranate ingadliwa uhlobo 2 lwesifo sikashukela, hhayi ngaphezu kwama-50 amagremu / ngosuku.
Ngingakwazi ukusebenzisa uju kwishukela?
Kuze kube yi-90s yekhulu lamashumi amabili, izazi zezempilo zathi uju kunezinhlobo zemikhiqizo ezingavunyelwe ngokuphelele kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi ngohlobo lwe-II sikashukela inani elincane lezinyosi (amagremu ama-5-7 ngosuku) akubangeli ukwanda koshukela wegazi ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu le-fructose kuju. Ngakho-ke, ingadliwa, kepha ngamanani alinganiselwe.
Ingabe kukhona ukudla okuphansi kwe-carb kwesifo sikashukela sohlobo 2?
Ukudla okune-carb ephansi kungokwabashukela abanohlobo lwesibili sikashukela, abanezinkinga zokukhuluphala ngokweqile. Ukuqondiswa kwayo okuyisisekelo kungukuncipha kokudla kwe-carbohydrate kanye nokwehla kwenani lamandla nsuku zonke lokudla. Njengenye indlela, abezempilo banamuhla bavame ukukunikeza ukudla okuvela emifino - kwezinye izimo basebenza kakhulu kunokudla kokudla okwenziwe ngemvelo okuvame ukwelashwa, okuvame ukunconywa odokotela.
Ingabe ukudla okuqinile kuyadingeka kushukela?
Isayensi yanamuhla ikhulise kakhulu imingcele yemikhiqizo evunyelwe yesifo sikashukela, evumela ukuthi iziguli ziguqule indlela yazo yokudla yansuku zonke. Ukuqina kokudla kuqukethe ukubala inani lama-carbohydrate adliwayo, kanye nokuqukethwe okuphelele kwama-khalori nokuvama kokudla, kuyilapho izingxenye zomuntu ngamunye zokudla kumele zishintshwe ngokufanayo phakathi kwamaqembu abo.
Ingane yazalwa inesifo sikashukela. Ungayondla kanjani?
Akukacaci ukuthi uluphi uhlobo lwesifo sikashukela esihilelekile. Uma ingane yakho inohlobo lwesikhashana lwesifo sikashukela se-neonatal, ingelashwa futhi, njengomthetho, ungayiqeda ngokuphelele ingane yayo. Uma sikhuluma ngesifo sikashukela esingapheli se-neonatal, khona-ke impilo yonke yengane idinga ukuqokwa kwe-insulin futhi, ngakho-ke, ukwelashwa impilo yonke. Zombili lezi zinhlobo zezifo azivamile futhi ziyindabalo yezakhi zofuzo, kwesinye isikhathi okuholela ekutheni kuthayiphe isifo sikashukela sokuqala ngokuzayo.
Mhlawumbe usho ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 2 esitholakala ebuntwaneni? Kunoma ikuphi, ingane yakho idinga ukudla okunempilo okulinganisela ngokuphelele kuzo zonke izindlela, kwanelisa izidingo zamandla zomzimba ezikhulayo. Ukondliwa kwengane enesifo sikashukela akuhlukile ngokuhlelekile ekudleni kwengane enempilo yobudala obufanayo nezinhlaka ezifanayo zokuthuthuka ngokomzimba - kuphela izidakamizwa ezinobungozi ezicacile ezisuselwa kumakhabishi ahlanziwe, amaswidi noshukela, kanye nemikhiqizo equkethe amafutha anciphisayo kanye ne-cholesterol eningi. Kukhonavinjelwe okulinganiselwe kwesinkwa esimhlophe, ilayisi ne-semolina, kanye ne-pasta - zingakhawulelwa ngokuphelele.
Ngokwemvelo, lokhu akuphathelene nezinhlobo ezimbi kakhulu zesifo esigabeni sokubuyiselwa kwemali. Kunoma ikuphi, ekwakhiweni kokudla kwengane yomuntu ngamunye, udinga ukuxhumana nomondli wezempilo onake uhlobo lwesifo sikashukela enganeni yakho, izici zomzimba wakhe, nezinye izici.
Izici zokudla kwabanesifo sikashukela
Phambilini, uhlelo lokuvinjwa kokudla bekuyindlela kuphela yokunqanda i-hyperglycemia noma amazinga aphezulu kashukela. Manje ukudla kweziguli sekukhule kakhulu. Abanesifo sikashukela belulekwa ukuba banamathele emithethweni eminingana ebalulekile yokulawulwa kokushukela kwegazi okusebenzayo.
Iziguli akufanele zihlale zilambile noma zidla ngokweqile. Lezi zimo ziyingozi empilweni yazo. Kuyadingeka ukudla ukuze inani lama-carbohydrate adliwayo lasatshalaliswa ngokulinganayo usuku lonke.
Izidingo ezijwayelekile zokudla:
ukuhlukaniswa kokudla (okungenani izikhathi ezi-6 ngosuku),
ukubalwa kwama-carbohydrate aqediwe,
imikhawulo yamafutha ezilwane,
ukwethulwa kokudla kwezitshalo ekudleni,
preference kokudla okutshontshiwe, kuhhavini, ngendlela ebilisiwe,
ukunqatshelwa kokudla okunyusa umthwalo we-carbohydrate, noma ukukukhawulela,
ukudla okuqinile kwe-fiber,
ukuhambisana nombuso wokuphuza,
ukunciphisa usawoti kokudla,
Ukuze ama-carbohydrate afakwe kancane futhi angabangeli ukugxuma ekwandeni koshukela wegazi, kufanelekile ukulandela izincomo ezilandelayo:
Yidla ukuqina okuhlanganisiwe noma okubumbayo, ngokwesibonelo, okusanhlamvu okuxegisiwe esikhundleni sokuxoxwe noma okubilisiwe.
Izitsha akufanele zishise, njengoba izinga lokushisa lithinta ukuthathwa kweglucose.
Ukufayila kokudla kuvimbela ukumuncwa kwama-carbohydrate alula futhi kusiza ukususa i-cholesterol.
Ama-carbohydrate alula adliwa kangcono ngemuva kwesidlo esikhulu.
Imenyu ingafaka ukudla okuqukethe ama-carbohydrate alula ane-fiber, njengezithelo namajikijolo. Ukufakwa kwe-glucose kuyehla uma kudliwa ngamaprotheni (ukhilimu wamaprotheni) noma amafutha. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi ama-carbohydrate “ahamba kancane” nawo adonswa egazini, andisa ushukela.
Umehluko ekondlekeni kohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela mellitus
Njengoba izimbangela zokwanda ushukela wegazi ohlotsheni lwesifo sokuqala nolwesibili zihlukile, kunezindlela ezimbalwa zokudla kweziguli. Ezigulini ezithembela i-insulin, ukondliwa kwehluka kakhulu. Njengoba behlushwa yile ndlela yokuzivocavoca kaningi esemncane, ukudla okune-khalori ephezulu kufakiwe ekudleni. Lapho udweba ukudla, izingcezu zezinkwa ezidliwayo ziyabhekelelwa.
Ngesifo sikashukela sohlobo 2, umsebenzi oyinhloko wokudla komzimba ukunciphisa umzimba. Kulokhu, imenyu ibalwa ngokuqukethwe kwekhalori kwemikhiqizo. Iziguli zinokudla okuqinile. Akufanele ushukela, ukudla okunamafutha nokudla okwandisa i-cholesterol.
Umqondo "weyunithi lesinkwa" (i-XE) wethulwa ukuthi ubike ngokwakhiwa kwe-carbohydrate. Kwi-1 XE, kubhekwe ukuthi kungama-25 g wesinkwa noma ama-12 g kashukela (ama-carbohydrate). Ishadi le-breadcrum libalulekile kuma-diabetes ukuze abale i-insulin efushane elungiselelwe.
Ku-1 XE kudinga amayunithi angama-2-4. insulin Isidingo ngasinye sokuphathwa okwengeziwe kwe-insulin yi-XE sinqunywa kusetshenziswa idayari yokuzihlola, okufanele igcinwe yisiguli.
Esidlweni esisodwa, onesifo sikashukela akufanele adle ngaphezu kwe-7 XE.Umthwalo oyinhloko we-carbohydrate usengxenyeni yokuqala yosuku. Ukuze singabali njalo isisindo semikhiqizo yesinkwa, sidale amatafula womkhiqizo kucatshangelwa inani lamandla abo.
Iyini inkomba ye-glycemic yemikhiqizo
Inkomba ye-glycemic index (GI) iyinkomba ekhombisa ukuthi lingakanani ushukela wegazi ongakhuphuka lapho usebenzisa umkhiqizo othize kuqhathaniswa neglucose.
Ukudla okuphezulu kwe-GI (70 nokuningi):
amaswidi - izinti zommbila, ilayisi egcwele.
Isilinganiso se-GI (56-69):
Ama-GI aphansi kakhulu ane:
uphizi, ubhontshisi, udali kanye nezinye izinsalela.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, kuvunyelwe kuphela ukudla okuphakathi nendawo okuphakathi.
Uhlu lwemikhiqizo evunyelwe nenqatshelwe
Izimiso zokudla kwabanesifo sikashukela ezinezinhlobo ezihlukile zezifo ziyahlukahluka. Kodwa-ke, kukhona izitsha ama-endocrinologists angakukhuthazi ukudla.
Uhlu lwemikhiqizo enqatshelwe lufaka:
amazambane - okuthosiwe, ama-fries, ama-chip,
izithelo ezimnandi - amagilebhisi, amapharele, ubhanana,
Ukudla okusemathinini emafutheni,
ushizi omnandi, curd,
isinkwa esimhlophe namakhekhe kafulawa omhlophe,
Iziguli kuzofanele zithandane nokudla neziphuzo ezinjalo:
amajusi asanda kufakwa kusuka kumajikijolo amnandi namuncu,
Izithelo zomndeni wamawolintshi ezingafakiwe,
amajikijolo afriziwe namasha
imikhiqizo yobisi engenamafutha ngaphandle koshukela,
inyama yokudla - inkukhu, iturkey, i-veal, unogwaja,
Lapho uhlanganisa imenyu, kungakuhle ukubheka kuphela umthwalo we-carbohydrate kanye namakhalori wemikhiqizo, kodwa nomsebenzi wesifo sikashukela. Ukuzivocavoca kwehlisa ushukela wegazi. Esikhathini sikashukela sohlobo lokuqala, kunconywa ukudla i-1 XE ngehora ngalinye lomsebenzi womzimba. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ungashintshi umthamo we-bolus insulin.
Ngokukhuluphala, i-yokudla kusiza ukudweba ukudla ibheka inani lamandla (okuqukethwe ikhalori) yemikhiqizo kanye nokusetshenziswa kwamandla nsuku zonke ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Uma kubalwa kubhekwe ubulili, iminyaka nobungako bokukhuluphala kweziguli. Kuvunyelwe ukuhlela izinsuku zokuzila (ngesifo sikashukela sohlobo 2). Kodwa-ke, ukubulawa yindlala kuyaphulwa kulezi ziguli.
Ngesikhathi sokulungiswa kwemenyu, kubhekwa isimo esivamile sesifo sikashukela. Ikhulelwe futhi iletha, intsha, iziguli ezibuthakathaka zidinga ukuphuza amaphrotheni. Uma isiguli sinokuhluleka kwezinso noma kwesibindi, i-ketoacidosis, ukudonsa kwamaprotheni kuyancipha.
Ungakhohlwa ngezinye izakhamzimba ezibandakanyekile ekugayweni komzimba: amavithamini, i-zinc, ithusi, i-manganese. Ngenxa yokuthambekela kweziguli kuma-pathologies wesistimu yenhliziyo, anciphisa okuqukethwe kasawoti ezitsheni.
Imenyu eyisampula yeviki
ibhulakufesi: iphalishi le-buckwheat, isinkwa se-protein-bran ne-bhotela, itiye,
isidlo sasemini: isobho senkukhu, isaladi yemifino enamakhambi, ubhontshisi oluhlaza okotshani ne-patty yenyama emhlophe, i-compote, isinkwa sikashukela sikashukela,
isidlo sasemini: isinkwa nge-yogurt,
isidlo sakusihlwa: umusi we-zrazy nenhlanzi, isinkwa se-rye, isaladi yemifino,
ukudla okulula: isiphuzo sobisi olubilisiwe.
ibhulakufesi: i-oatmeal, isinkwa esinezinhlamvu ngebhotela, itiye,
umthamo: isaladi yeparsley, anyanisi kanye amakhowe,
isidlo sasemini: isobho le-pea, inkukhu ebhakwe ngemifino, isaladi yemifino, isinkwa sokusanhlamvu, isiphuzo,
isidlo sasemini: i-ryazhenka enamabhisikidi,
isidlo sakusihlwa: isidlo senhlanzi nemifino, isinkwa sokusanhlamvu, ujusi,
ibhulakufesi: iphalishi “Artek”, isinkwa se-protein-bran ne-bhotela, ikhofi,
ukudla okulula: isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isaladi, i-apula nesanqante,
isidlo sasemini: i-borsch, iphalishi le-buckwheat ne-patty enomusi, isaladi ye-sauerkraut, isinkwa se-protein-bran, i-compote,
isidlo sasemini: ushizi wasekhishini ngezithelo,
isidlo sakusihlwa: ama-bigos ane-sauerkraut nenyama, isinkwa se-protein-bran, ujusi,
umthamo: i-apula ebhakwe.
ibhulakufesi: amaqanda, isinkwa rye nebhotela, itiye,
umthamo: ikhekhe ushizi nge yoghurt,
isidlo sasemini: i-borsch eluhlaza okotshani, isitshalo seqanda esibhakiwe nenyama, isaladi le-utamatisi no-ukhilimu omuncu ophansi, isinkwa sikarayisi, i-compote,
itiye lasemini: ukotini ushizi odonsa ngetiye,
isidlo sakusihlwa: inyama yenyama ngemifino, isinkwa rye, isiphuzo,
umthamo: isinkwa se-kefir.
ibhulakufesi: iphalishi lebhali, isinkwa sokusanhlamvu nebhotela, itiye (i-chicory, ikofi),
ukudla okulula: isaladi lezithelo ngeyogathi,
isidlo sasemini: isobho lezinhlanzi, inhlanzi eyinqunyelwe ngesitsha semifino ohlangothini, upelepele webheli nesaladi lamakhukhamba, isinkwa sokusanhlamvu, isiphuzo se-citrus,
isidlo sasemini: isinkwa sobisi,
isidlo sakusihlwa: usike usawoti nosawoti wobisi, iphalishi, isinkwa sokusanhlamvu, ulamula
ibhulakufesi: omelet ngesinkwa se-veal, isinkwa se-protein-bran noshizi, itiye,
ukudla okulula: ikhekhe ushizi onamajikijolo,
isidlo sasemini: isobho le-mushroom, iphalishi ngenyama ebilisiwe (ebhakwe), uphizi obhontshisiwe no-anyanisi namakhambi, isinkwa esinegama lamaphrotheni, i-compote,
isidlo sasemini: amakhukhi we-oatmeal nge-ryazhenka,
isidlo sakusihlwa: i-zucchini egcwele inyama, iphalishi, isinkwa se-protein-bran, isiphuzo,
ukudla okulula: ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
ibhulakufesi: irayisi elinsundu enenyama nengulube neklabishi (imiqulu yeklabishi), isinkwa se-rye nebhotela, itiye,
ukudla okulula: isinkwa nge-yogurt,
isidlo sasemini: isobho le-meatball, i-omelet yenkukhu, isaladi leklabishi elibomvu, isinkwa se-rye, isiphuzo,
isidlo sasemini: i-kefir enamabhisikidi,
isidlo sakusihlwa: amakhekhe ezinhlanzi, amazambane abhakwe, isinkwa rye, isiphuzo,
umthamo: ibhisikidi ngobisi.
Ukudla okwenziwe ngomumo kwabashukela
Ukudla kahle ushukela, udinga ukuchitha isikhathi esiningi nomzamo. Iningi labanesifo sikashukela limane alinaso isikhathi esanele sokuqamba kahle imenyu nokulungisa ukudla, manje-ke ngifisa ukukutshela ngenkampani yakwa-Cryodiet, esiza ukwenza impilo ibe lula kubantu abanesifo sikashukela.
I-Cryodiet iyinsizakalo yokulethwa kokudla okwenziwe ngomumo nokunambitha, hhayi kuphela kwabanesifo sikashukela, kepha futhi nakubantu abafuna ukunciphisa umzimba. Imenyu ibunjwe ngochwepheshe abanekhono - izazi zokudla kanye nodokotela.
Ngenxa yokusebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile “obabandayo bokwethuka”, kufanele uvuselele ukudla ku-microwave noma umpheki omncane bese udla kamnandi. Ngasikhathi sinye, iqhwa ligcina zonke izakhamzimba.
Izinzuzo eziphambili ze- "Cryodiet":
ukukhiqizwa endaweni ehlanzekile yemvelo yesifunda seNovgorod,
ukubanda kokuqhaqhazela (kulondolozwa ukudla ngaphandle kokulondolozwa),
izintengo ezinengqondo ngokwengeziwe ngokuqhathaniswa nezimbangi.
Inkonzo yokulethwa kokudla sikashukela iyatholakala eMoscow naseSt. Petersburg, ngakho-ke uma ufuna ukudla ukudla okunempilo futhi ungachithi isikhathi esiningi kulokhu, oda imenyu yamasonto onke kuwebhusayithi esemthethweni https://cryodiet.ru. Uma u-oda, faka ikhodi yephromoshini "sdiabetom"
futhi uthole isaphulelo esingu-5%